Imbonakalo yesibhakabhaka - I-Airbnb
Le ndlu ibekwe kumbindi wedolophu yaseMallaig ineembono ezizukileyo phezu kwezibuko.
Le ndlu ifaneleka ngokufanelekileyo kuye nawuphi na umtyeleli kule ndawo, nokuba ufuna indawo ethe cwaka esezintabeni okanye ujonge i-adventure ezintabeni. Njengenxalenye ye-Outdoor Capital yase-UK, i-Lochaber, kukho iindidi ezininzi zemisebenzi yayo yonke iminyaka ebandakanya, ukukhwela, ukuhamba, ukutyibiliza, ukukhwela ikhephu, ukuLoba, ukukhwela ibhayisekile eNtabeni, ukukhwela isikhephe, ukukhwela inqanawa, ukukhwela inqanawa, ukukhwela iKayaking nokunye okuninzi! Ibekwe ngokugqibeleleyo ukuze ukhenkethe iiNtaba eziphakamileyo, undwendwela iSkye, eGlencoe, usenokuthi krwaqu uNessie eLoch Ness, okanye ungene kuloliwe omangalisayo weWest Highland Steam Train, eyimfuneko kubo nabaphi na abalandeli bakaHarry Potter!
Indawo yokuhlala inomnyango wabucala kwaye ikumgangatho omnye.
Igumbi lokuhlala linebhedi yesofa, isitulo sengalo, kunye netafile yokutyela enezitulo ezine. Kukho i-Smart TV enokufikelela kwiitshaneli zeFreeview kunye nesidlali seDVD. Kukho iWiFi engenamkhawulo yasimahla. Ukongeza, indawo yomlilo yombane. Siyakucela ukuba usazise kwangaphambili ukuba ufuna ukusebenzisa ibhedi yesofa. Kukho i-£ 50 ngobusuku obunye.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngeketile, umatshini wekofu, itoaster, i-oveni, ihob, imicrowave, iwashi yokuhlamba izitya, ifriji/ifriji, kunye nomatshini wokuhlamba. Yonke ilinen ekhitshini inikezelwe. Sibonelela ngepakethe yokuqalisa eneti, ikofu, iswekile kunye nobisi ukuvumela ukuba ukhululeke kwaye uphumle kwangoko.
Igumbi lokuhlambela lineshawa, isitya sokuhlambela izandla, kunye nendlu yangasese. Zonke ilinen yokuhlambela kunye nezinto zangasese zibonelelwa.
Igumbi lokulala libandakanya ibhedi ephindwe kabini, iitafile ezimbini ezisecaleni kwebhedi ezinezibane, i-wardrobe kunye nedesika. Zikhona zonke iilinen zokulala.
Lilonke, isayizi elungileyo yale mihla kunye nefulethi elinesitayile kwindawo efanelekileyo kakhulu.
Ukongeza, sinobubele kwizilwanyana zasekhaya! Siyakucela ukuba usazise kwangaphambili ukuba uza nomhlobo wakho osenyongweni. Kukho i-£20 yesilo-qabane ngentlawulo yokuhlala nganye.
4.65 · Izimvo eziyi-21
Izibuko elixakekileyo nelikhulayo laseMallaig likunxweme olusemantla entshona ekupheleni kweNdlela edumileyo eya kwiZiqithi.
Idolophu yindawo enomdla apho iindwendwe zinokufunxa umoya wechweba elisebenzayo lokuloba kodwa kwangaxeshanye indawo yayo ekude yenza ukuba ibe yindawo entle yokuphumla. Zama uhambo olumnandi lweSekethe yeMallaig eneembono ezintle phezu kwezibuko laseMallaig kunye nokuwela iLoch Nevis ukuya eKnoydart.
Ngenxa yendawo yayo yeqhinga, iMallaig isisiseko esihle sokuhlola indawo ejikelezileyo kwaye lisango elikhulu kwi-Isle of Skye. Iinkonzo ezicwangcisiweyo ezidibanisa iMallaig kunye nesiqithi ziqhutywa sisikhephe saseCaledonian MacBrayne kwaye zisebenza unyaka wonke.
Uloliwe owaziwayo uJacobite umphunga (oboniswe kwiimuvi zikaHarry Potter) ulandela iNdlela edumileyo eya kwiZiqithi kwaye usebenza kwiinyanga zasehlotyeni ukusuka eFort William ukuya eMallaig, efowunela kwisikhululo saseGlenfinnan apho iindwendwe zinokundwendwela imyuziyam, zibe nesidlo kwenye iimoto zokutyela ezindala kwaye ude uhlale kwenye yeekhareji ezibuyiselweyo. Isikhumbuzo esidumileyo sikaBonnie iNkosana uCharlie eGlenfinnan akufuneki siphoswe.
Ngokuqinisekileyo sikhona ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho ngenombolo yoncedo lweendwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mallaig